I-Super Bowl 2019: UTony Romo uyiNkwenkwezi yeQela losasazo le-CBS - Ukudlalwa Kwenfl
I-Romomania ibetha iSuper Bowl
Yonke into ekufuneka uyazi ngeSuper Bowl LIII
Ndimncinci kakhulu kwiBeatlemania. Kodwa namhlanje ndinxibe uncumo olwanelisekileyo losana olunomdla. Kuba bendikwi Super Bowl eAtlanta yeRomomania. Kwiminyaka ukusukela ngoku, ndiza kubalisa ngamabali ngale veki ukuba ndibazilele abazukulwana bam.
I-Romomania phantse yenza ukubhala malunga nobomi babhengezi bezemidlalo kubonakala ngathi ngumgca osemthethweni womsebenzi. Ngethuba lokuqala kwimemori, umvakalisi weTV waqhuma ebhokisini encinci kwiphepha le-Super Bowl Wikipedia waza waba ngumgca webali kunye naye. E-Atlanta, uRomo udliwanondlebe oluphezulu ezintlanu, ngasemva kukaTom Brady, uBill Belichick, kwaye (mhlawumbi) enye okanye ezimbini zeeRams. I-Romo, kuthiwa, iya kuba yinto yemfazwe yokubhida ye-arhente yasimahla phakathi kwenethiwekhi-kwaye ukuba iqela leNFL alimqeshi njengomqeqeshi wabo oyintloko kuqala.
Kwi-Super Bowl, intatheli zihlala zibuza abavakalisi malunga nezicatshulwa malunga nomdlalo. Kumsitho weendaba we-CBS ngoLwesibini, intatheli zibuze ababhengezi malunga nezicatshulwa malunga noRomo. Mnu. Nantz, kunjani ukusebenza nje iinyawo ukusuka kwisithixo esaziyo konke? Kwelakhe icala, uRomo wayemi eqongeni enxibe isuti eluhlaza okwesibhakabhaka enamateki amhlophe. Ukuqhutywa ziintatheli, wavuma ukuba asuse isenzo sakhe saseRomostradamus-amandla akhe okuxela kwangaphambili.
Amanqaku okugqibela eSuper Bowl aya kuba ngama-28-24, utshilo uRomo. Wongeze wathi, kwaye ndicinga ukuba iqela elinama-24 linebhola ekugqibeleni kwaye abafumani manqaku.
Ukuma kwinqanaba phantse ngqo emva kweRomo ngeli xesha lomsebenzi nguPhil Simms. Iisimms zazisoloko zinomsebenzi kaRomo njengo-no we-CBS. 1 umhlalutyi. Kwiminyaka emibini eyadlulayo, xa i-CBS yasayina iRomo, inethiwekhi yagxotha iiSimms kumdlalo weqonga. Njengosihlalo weCBS Sports uSean McManus encoma uRomo, uSimms ebukele ngokungabinamlomo.
jeff bezos intombazana ephilayo
UTony Romo kwikamva leNFL Quarterback Play kunye noDynasty-Ukwakha kwezemidlalo
UTony Romo Udlala 'iMadden' njengePro Quarterback yangaphambili
Ubomi obuhle bukaTony Romo
Xa uthatha isitokhwe seRomanomania, kuya kufuneka uyixabise isigqebelo. Ngo-2016, uRomo waphulukana nomsebenzi wakhe njenge-Dallas Cowboys kwikota ebuyela kumntu omtsha owayengumntu wonke owela phezu kwakhe ukuze adumise. Kwi-CBS, kwenzeka into efanayo. Kuphela buthuntu ibingumntu omtsha.
Njengekota yekota, uRomo kwathiwa akanalo isithako esibalulekileyo esiza kumbeka eklasini kunye noTom Brady noPeyton Manning. Ngoku, emva nje kwamaxesha amabini ebhotile, akukho gunya lingaphantsi kukaStephen A. Smith athi nguRomo ukubhengezwa kweGoAT .
Njengekota yekota, uRomo wabonwa nje ngokungathandabuzekiyo. Kumabonwakude, ungumfundi womdlalo, kwaye ubuhle bakhe buyekisiwe njengentsholongwane.
Njengekota yekota, uRomo naye wadlala kakubi kumaxesha amabi. Emva kokubukela uRomo ngokuqikelela ngokuchanekileyo umdlalo emva komdlalo ngexesha lokudlala ixesha elingaphezulu komdlalo wobuntshatsheli weKansas City-New England AFC, umvelisi we-CBS uJim Rikhoff uthe, ndicinga ukuba unamaxesha akhe amahle kwimidlalo emihle.
Oko uRomo ahlangabezana nako ndikubiza ngokuba ngamandla okuphilisa kumabonwakude. Yinkqubo eye yaphakamisa imisebenzi yesibini yababhengezi ukusuka kuAlex Rodriguez ukuya kuDoug Collins kuDon Meredith, nangona uRomo isenokuba ngowona mzekelo wayo.
Oko uRomo ahlangabezana nako ndikubiza ngokuba ngamandla okuphilisa kumabonwakude. Yinkqubo eye yaphakamisa imisebenzi yesibini yababhengezi ukusuka kuAlex Rodriguez ukuya kuDoug Collins kuDon Meredith, nangona uRomo isenokuba ngowona mzekelo wayo. Kwenzeka ntoni ezo mpawu zikubambeleyo njengomdlali okanye umqeqeshi kuba, ngomlingo weTV, yeyona asethi yakho inkulu. Umdlali ongafezekanga uyinto ekufutshane nomvakalisi ogqibeleleyo.
Emva kwentetho yakhe yokuvula kumnyhadala weendaba we-CBS, uRomo wahlaselwa ziintatheli eqongeni. Ukujoyina isihlwele, ndema ecaleni kombhobho osusa umbhobho osuka kumboniso wetheyibhile Ngaphakathi kuHlelo . Xa efumene ithuba, intatheli yabuza uRomo, Ithini ingoma yakho? Andicingi ukuba babuza loo nto kuTroy Aikman okanye kuCris Collinsworth.
UMcManus uthe akafuni ukuba abantu baxhonywe ngamandla kaRomo okuqikelela. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, unendawo. URomo utshintshe ukusasazwa kwe-CBS ngeendlela ezifihlakeleyo ezandayo ngaphandle kwengqikelelo yakhe.
Enye into, unike uJim Nantz, okwi-network ukusukela ngo-1985, amandla amatsha, amandla amatsha. Ndive abantu abaninzi besitsho, uNantz undixelele kule veki. Kusenokwenzeka ukuba yinyani. … Ndiziva ngathi ndizama ukudibanisa nehlombe likaTony.
Ndimele ndinyaniseke, utshilo uTracy Wolfson, intatheli yecala labasebenzi. Ndizive ndiphinde ndavuseleleka ndisihla ngokuhamba kwexesha. URomo akangomvakalisi nje. Uyisiselo esinamandla.
Ayisiyo kuphela ukunxanelwa kukaRomo kwebhola okutshintshe iqela le-CBS. Njengokuba kuphawulwa nguWolfson, ukuqeshwa kukaRomo kwavumela ukuseta kwakhona okungaqhelekanga kohayi. Iqela lenethiwekhi eli-1, ithuba lokucingisisa ngokutsha usasazo ukusuka emhlabeni ukuya phezulu. Kwisidlo sangokuhlwa noRomo ngoMvulo, uWolfson wazisa enye ye-gripes yomgcini-ntetho we-sideline: xa behambisa udliwanondlebe olunomdla kunye nomqeqeshi ngaphandle kwesiqingatha sexesha kunye nababhengezi ebhotileni bayeke nje ixhome i-ether.
Xa ndisenza ingxelo ngesiqingatha sexesha kwaye kufuneka impendulo, uWolfson wathi uxelele uRomo, uyasabela.
Ewe, uRomo waphendula. Ndisebenza nzima kakhulu kuloo nto.
Usasazo lweNFL kwi2019 kukutsala okutsala phakathi kwe-X kunye nee-O's for superfans and wide, magic-of-TV izinto zoluntu lonke. URomo ugudla usasazo kwicala langaphambili. Uza kubona into kwi-All-22 kwaye ndifuna ukwenza umdlalo wobugcisa, utshilo uRikhoff. Ndifuna ukubonisa ukuba iinyawo zakhe bezingaphaya kwemida; ufuna ukophula umdlalo.
URikhoff uthe uRomo ngamanye amaxesha utshintsha umfanekiso oqhelekileyo weTV esiwubonayo ngaphambi kokuba ibhola ichithwe. UTony uya kuthi, 'Hayi, phangalala,' kuba ubona into, utshilo uRikhoff. Ke siza kubonisa ukhuseleko kwisakhelo ukuze akwazi ukuthetha ngaloo nto, naye.
Kunyaka wakhe wesibini esemoyeni, uRomo akamangaliswanga ngokumangalisayo. Mhlawumbi ungumvakalisi wokuqala bhekisa kumdlalo bhanyabhanya Ubuhle baseMelika ngexesha lomdlalo. I-Romo ayivakali njengabafana bombala abebesebenzisa imiyalelo yabavelisi iminyaka engama-20 nangaphezulu: Vumela umdlalo wokudlala-ngokudlala ugqibe, emva koko wenze ngqo 7.5 imizuzwana yohlalutyo… Ngexesha lokuziqhelanisa no-2017 eDallas, uRomo wenza izinto ezininzi eziphosakeleyo-ethetha ngamaxesha angalunganga, yithi-kwaye abavelisi be-CBS, emva koqwalaselo oluthile, bathathe isigqibo sokumvumela ukuba aqhubeke.
Kumdlalo wokuqala wePatriots wexesha elongezelelekileyo kumdlalo wobuntshatsheli we-AFC, uRomo wathetha kwangoko nangaphaya kwaye wadlula kwi-snap yebhola-indawo yokuncokola ehlala igcinelwe umvakalisi wokudlala-ngokudlala. Bafaka abafana abakhulu ngaphakathi, uRomo wakhwaza ngokukhusela iiNtloko. Bazama ukunqanda ukubaleka komdlalo wokuqala.
Ngomhla wokuqala kwabathathu abaPatrioti abafowunela ezantsi, waxela ngokuchanekileyo, uRomo wayedweba kwiscreen kunye neTelestrator njengoko ibhola yayihluthiwe. Le yinto abahlalutyi bemibala abayenziyo okanye abayenzi kakhulu kunqabile. URomo uyenza kakhulu.
Kodwa into ethathe iRomomania ngaphaya kwemida yemidlalo yeTV kukubona kwakhe okwesibini. Ijenali yeWall Street UBen Cohen noAndrew Beaton ixelwe ukuba uRomo ufumene iipesenti ezingama-68 zesibikezelo sakhe ngeli xesha lonyaka. Uqikelelo, uMcManus uqaphele, aqhekeza ukujonga okujonge ngasemva kweTV yezemidlalo. Kukho utyekelo ngamanye amaxesha lokuba nomdlalo, uphawule ngokudlala kwakhona, ube nomnye umdlalo, uphawule ngokudlala kwakhona, utshilo. Ndicinga ukuba uTony unesakhono esinqabileyo sokujonga phambili kunye nokujonga ngasemva.
Uqikelelo lukaRomo luye lwaba yinto. Kutshanje, owayesisithethi sangaphambili sikaHillary Clinton wabuza URomo ukuqikelela ukuphela kokupheliswa kukarhulumente. Umsasazi wase-Australia uGerard Whateley undixelele ukuba abahlalutyi bemibala yelizwe lakhe bathetha ngokuba isipho sikaRomo singadluliselwa kwezabo imidlalo.
Uluhlu lweefilimu zesenzo se2018
Lo Romo, umnini weCowboys UJerry Jones wandixelela e-ofisini yakhe ekwindla, ukhethekile kakhulu ukuba akukholeleki.
Emva koko uJones wathoba ilizwi lakhe. Kwakungathi uthetha ngemfihlelo yobugqi. Bekusoloko kukubona kwakhe, utshilo uJones. Yena nje uyabona yiyo.
Bekungayi kuba ngumdlalo weTV ukuba iRomomania ayinayo intengiso yorhwebo. Inkqubo ye- INew York Post NguAndrew Marchand uxele ukuba ikhontrakthi kaRomo izakuphela kunyaka ozayo, kwaye loo msitho unokumisela i-sweepstakes ye-TV ekhululekileyo engabonwayo okoko uJohn Madden wayenenethiwekhi ezinyaweni zakhe kwi1994.
I-NFL enkulu ye-Heist: Ihlawulwa njani i-Fox kwaye itshintshiwe iBhola engunaphakade
Yintoni uRomo ayenzela yona kukuba uyingqayizivele ngendlela uMadden noCharles Barkley bahlukile ngayo. Abantu abanjengoTony Romo beza kube kanye kwisizukulwana, utshilo uRikhoff.
URomo uneemayile zokuhamba ngaphambi kokuba afane neMaddenmania, i-30-plus-year extravaganza ye-Miller Lite kunye ne-Ace Hardware ads, kunye nemidlalo yevidiyo, kunye nokufikelela kwenkcubeko ye-pop eyayikwibhokisi yezulu efanayo nekaJohnny Carson. Kodwa uRomo wenze into eyenziwe nguMadden kunye nabanye abadlali bezemidlalo abambalwa. Uvale umsantsa ophakathi kwabathandi bebhola.
Ngo-2019, uneentlobo ezahlukeneyo zabalandeli beNFL. Unodidi oluphakanyisiweyo olukhuliswe kwiimfundiso zikaBill Barnwell, Aaron Schatz, kunye noWarren Sharp. Emva koko unabaphulaphuli abakhulu, abaqhelekileyo abanokwazi into enye malunga nomqeqeshi weRams uSean McVay-kwaye ke yena umncinci. URomo udlala kuwo omabini la maqela, ebonelela ngokwaphuka kwesikimu kwimisindo yangaphambili kunye nehlekisayo yokugqibela.
Xa ebuzwa ukuba ukhathazekile malunga nokusayina kwakhona uRomo, uMcManus unike into onokuyibiza ngokuba kukuzithemba okuhlekisayo. Andiyiyo, watsho. Ndineenjongo zonke kwaye ndicwangcise ukuba noTony kwi-CBS ixesha elide.
Ngo -94, uMadden wayeneenethiwekhi zosasazo ezisakhasayo ezinyusa ixabiso. URomo akazukuba nalo olo hlobo lokuphakamisa-okwangoku, kunjalo. Kodwa usenokuba nolunye unyaka olandelayo, ngakumbi ukuba i-ESPN ithathe isigqibo sokuhamba nayo NgoMvulo ebusuku Ibhola .
Umthombo oqheleneyo nothethathethwano wathi iRomomania inokufikelela kwincopho yayo ngo-2022, xa iiphakheji zamalungelo ezothungelwano eziphambili ziphela. I-CBS izibophelele kwi-NFL. UFox uzibophelele kwi-NFL (kwaye uTroy Aikman wenze ingxolo ngokufuna ukuqhuba iqela). UDisney uthethile ngokufumana iphakheji yangeCawa yeABC.
Isivumelwano sikaRomo, umthombo uthe, mhlawumbi unokuba neengxaki. Ukuba [i-CBS] abayigcini iphakheji yeNFL, ingamnika ilungelo lokuya kwenye inethiwekhi. Unokutsiba kwakhona ukuba uyayishiya i-CBS. Ke utyikitya isivumelwano seminyaka emithathu okanye emine. Kodwa akazukuyenza loo nto ngesaphulelo. Umthombo uqikelele ukuba inani likaRomo linokuphindaphinda kabini umvuzo wakhe wangoku wezigidi ezi-4 zeedola. Oko kubonakala ngathi yimali eninzi kumntu osebenza malunga neeCawa ezingama-20 ngonyaka. Emva koko, bekude ixesha elide singaboni nto efana neRomomania.
Amandla okuphilisa kamabonwakude anokutshintsha ngokupheleleyo umfanekiso kawonke-wonke womdlali okanye womqeqeshi. Ngexesha lokudlala kwakhe, abantu baxhonywa kwinto yokuba uAlex Rodriguez wayelichule. UFox (ngokukodwa umphathi ophumileyo uJohn Entz) wafumanisa ukuba uRodriguez wayenele ngokwaneleyo ukuba angene kwi-World Series pregame show.
ngaphandle kwemboniso bhanyabhanya
Njengomqeqeshi we-NBA, uDoug Collins unokuba yingozi kwiimvakalelo. (Emva kokumamela abanye abadlali bitch malunga nabaqeqeshi babo, uMichael Jordan ukhuphe umgca ongafiyo, Ukuba ucinga ukuba yinto ethile, umqeqeshi wam uyakhala yonke imihla.) Kodwa uCollins wayengumhlalutyi wemibala onomdla, kwaye waqeshwa kude kwiTV amatyeli amane . (Ndi ubhale kube kanye ukuba ufumene umsebenzi wakhe weeBulls emva kokwenza ubhengezo lwasekhaya eChicago.)
UJon Gruden, owangxola kumajelo eendaba ngeentsuku zakhe zokugqibela eTampa Bay, wayenoburhabaxa ngokwaneleyo Inkampu yeGruden yeQB . Omnye umphathi olwa nembangi wandikhumbuza ukuba, kwiminyaka emibini eyadlulayo, xa uJay Cutler watyikitya noFox ngaphambi kokushiya iiDolphins, abantu abaninzi babecinga ukuba uCutler angangcono kunoRomo. I-Cutler yayihlobo lwe-TV yejerk.
Oku kufanele kusifundisa izinto ezimbalwa. Inye kukuba izinto ezihlonitshwayo ezifumanekayo kubadlali ngexesha lomsebenzi wabo zihlala zigqithisile okanye zichanekile ngokucacileyo. URomo wayenengqondo yebhola ekrelekrele, nokuba wayengasoloko esenza ukuphosa okanye engenalo ilungelo elifanelekileyo lokumnceda amenze.
Esinye isifundo kukuba oko sikuthathela ingqalelo umzuzu wembaleki-i-Romo's shrug emva kokuphosa i-playoffs ka-2008, yithi-ihlala ingxolo nje. Okanye, njengokuba kunjalo ngo-Romo's goofiness, yintoni engaphezulu kwintsimi ibaluleke kakhulu kwi-booth. Umabonwakude yinkangeleko.
URomo akafezekanga. NgoLwesithathu, xa ndabuza iNFL Network's UMichael Irvin malunga noRomo, wabiza uthando ngomlingane wakhe wangaphambili uCowboy. Kodwa u-Irvin wongeze, ndisiva abantu bethetha, 'Ndoda, uTony uza kuba ngumqeqeshi obalaseleyo.'… Kukho isihogo sokwahlula phakathi kokubiza imidlalo kunye nokuqikelela imidlalo kunye nokulawula abazalwana abangama-53-oosozigidi ezingama-53.
Ngapha koko, ngelixa umdla kaRomo ulungile kwiKansas City-New England, ayikulungelanga kwaphela ukuqhushumba. Unemincili, unomdla kakhulu, kusafuneka sisebenze kwinto oyenzayo kule midlalo ingakhuphisaniyo, utshilo uRikhoff.
Kwakhe ukugquma ing kunye cinga edume kakhulu, uMadden wayengusonwabisi-ongomnye wabonwabisi ababalaseleyo kumabonwakude, ixesha. Kule nqanaba, uRomo uphumelele ngaphezu kokuhlekisa. Andazi ukuba angatyibilika iibhondi zika-X kunye no-O kwaye abambe ingqalelo yabaphulaphuli ngamandla obuntu.
Kodwa ukuba nenkohliso yeparlour kukufumana umgama omde. Vula NgoMvulo ebusuku Ibhola , UDon Meredith wayecula. Kwiminyaka yoo-80s kwi-CBS, uMadden wayeneTelestrator. URomo unezibikezelo.
E-Atlanta, ndabuza u-Patriots umlungelelanisi okhubekisayo uJosh McDaniels malunga noRomo ahlukanisa umdlalo wakhe wokudlala kwi-booth. UTony ungumntu okhethekileyo, utshilo uMcDaniels, ngaphambi kokurhoxa kwimikhwa eqheleke kakhulu yeRomomania.
Kodwa ayikhathazi wena , Ndibuzile, uyayazi into eza kwenziwa zii Patriots?
Wahleka uMcDaniels. Ndiyathemba ukuba singamgcina engalindanga kwaye angabikho-kwi-balance kancinci ngeCawa, utshilo. Omnye ummangaliso wamandla okuphilisa kamabonwakude. Ngethuba lokuqala kwikhondo lakhe lomsebenzi, uTony Romo unokuba liqela lekota le-NFL kwikota yokoyika kakhulu.
uNick cage vampire's kiss
Merriweather ipost pavilion yezilwanyana ngokudibeneyo
teddy perkins michael jackson
ujuliet litman kunye nodavid jacoby
anne hathaway oscars umgcini
Ama-yankees amarhe orhwebo ngo-2018